Etu ị ga-esi nweta nzacha zoro ezo na katalọgụ nsuso na Instagram | Gam akporosis
Etu esi enweta katalọgụ nzacha zoro ezo na Instagram
Edere Ferreno | | Gam akporo Ndị aghụghọ, Nkuzi
Akụkọ bụ akụkụ dị mkpa na Instagram, nke nde ndị ọrụ na-eji. Enwere ọtụtụ ọrụ maka akụkọ na netwọkụ mmekọrịta, dị ka ndị enyi kachasị mma. Ihe nkịtị bụ na ọtụtụ na-eji ụdị nzacha na mmetụta niile na akụkọ ha. Mana ị nwere ike ịchọ ịnweta nzacha ọhụrụ, nke a ga-ekwe omume site na gallery zoro ezo.
Ọ bụ ọrụ mmadụ ole na ole maara, ma e nwere a zoro ezo katalọgụ, na anyị nwere ike iji akụkọ na Instagram n'ụzọ dị mfe. Ọ ga-enye anyị ohere ịgbanwe akụkọ anyị na ngwa ahụ n'ụzọ dị mfe ma si otu a nweta ohere nzacha na mmetụta ndị a na-atọ ụtọ.
Maka nke a ga-ekwe omume, anyị kwesịrị imeghe akụkọ na Instagram, dị ka a ga - asị na anyị na - akwado itinye otu na akaụntụ anyị na netwọkụ mmekọrịta. Mgbe windo a meghere, pịa akara ngosi ihu ọchị, nke anyị ga-ahụ dị na akụkụ aka nri ala nke ihuenyo ahụ.
A obere menu ga-emeghe, ebe anyị ga-enwe ike ịhọrọ mmetụta anyị chọrọ iji na ngwa, na akụkọ. Ọ bụ ndabara menu, ebe anyị na- anyị na-ahụ nzacha ndị a maara na mmetụta. Anyị wee pịa nke anyị chọrọ, nke mere na windo ọhụrụ na-egosi na ala.
Mgbe ị na-ahọrọ otu, obere igbe ga-apụta, ebe anyị nwere nhọrọ nke ịchọpụta mmetụta. Pịa na nhọrọ a na A ga-akpọrọ anyị gaa na Galili Mmetụta Osimiri. N'akụkụ a, Instagram na-enye anyị ohere ịnweta ụdị nzacha ọzọ niile, nke anyị nwere ike ịhọrọ ma jiri na akụkọ anyị na netwọkụ mmekọrịta.
Anyị pịa na nke anyị chọrọ nwalee ma ọ bụrụ na anyị chọrọ iji ya, pịa bọtịnụ ule. Anyị ga-emeli ya jiri mmetụta ma ọ bụ nyo na akụkọ anyị na Instagram ma bulite ya ma emesịa na akaụntụ anyị. Goodzọ dị mma iji gbanwee akụkọ gị, yana mmetụta ọhụụ, nke ọtụtụ ndị ọrụ amaghi na netwọkụ mmekọrịta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo Ndị aghụghọ » Etu esi enweta katalọgụ nzacha zoro ezo na Instagram
Etu esi eziga foto na-enweghị atụ na Facebook Messenger
Pixel 4 XL 5G sitere na Geekbench na Snapdragon 855 na ndị ọzọ